Dhagayso Muusig Bilaash ah Barnaamijka Songza App
Dhageyso Muusikada Bilaashka ah ee Songza App
Free Music Streaming leh Songza App
Dib u cusbooneysiinta: Barnaamijka Songza wuxuu si rasmi ah uga fariistay xagashadii 31-kii Janaayo, 2016 kadib markii uu Google ku iibsaday 2014-kii. Qaar badan oo ka mid ah muuqaalada astaanta ayaa lagu geliyay barnaamijka Google Play Music, oo aad ka soo dejisan karto oo dhagaysan karto bilaashka labadaba iyo qalabka Android. Songza.com waxay sidoo kale u direysaa barnaamijka Google Play Music. Maqaalkani waxaa lagu sii hayaa ujeedo arji ah.
Fiiri liistada muusikada bilaashka ah ee muusiga.
Tan iyo markii ay kor u kacday internetka si ay u noqoto mid ka mid ah baahida guud ee reerka, dadku waxay isku dayeen inay ogaadaan sida ay u dhegeysan karaan muusikada bilaashka ah iyadoon loo baahnayn inay iska bixiyaan. Qof kastaa wuu ogyahay in wadaagada faylasha iyo burcad-badeedku ay muddo dheer dhibaato u yihiin ganacsiga muusikada, laakiin qof kastaa ma awoodo inuu iibsado muusikada ay jecel yihiin.
Songza waxay noqon kartaa xalka ugu weyn dhibaatadaas. Waa gebi ahaan xor ah, iyo aad u xiiso leh in la isticmaalo.
Waa maxay Songza?
Songza waa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay webka iyo qalabka mobile-ka kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​muusikada saxda ah waqtiga saxda ah. Waa cayaar muusikada shakhsi ah oo barata waxa aad jeceshahay oo ku siinayso talo soo jeedin qaas ah.
Barnaamijku wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan howlaha raadinta muusikada iyo abuurista rikoodhada gacanta. Markaad isticmaasho, ma heleysid xayaysiin maqal ah, xuduudo dhageysi iyo lacag la'aan .
Songza 's Feature Concierge Feature
Maxaa runtii ka soocaya Songza oo ka socda adeegyada kale ee muusikada sida Spotify ayaa ah qaab muuqaal ah. Waxay kuu dejineysaa liistada adiga oo ku saleysan taariikhda, waqtiga iyo niyadda aad ku jiri karto.
Tusaale ahaan, haddii ay tahay habeyn Arbacada, xerada Songza waxaa laga yaabaa inay ku waydiiso haddii aad rabto inaad dhageysato muusikada ku aaddan mudo dheer kadib, si aad u shaqeyso, safar fiidki ah, barashada ama cunto cashada.
Inkasta oo ku-xigeenka uu ogaado waqtiga iyo taariikhdaada, waxaad mar walba ku socon kartaa "Raadinta" tabaha si aad u hesho doorashooyin dheeraad ah ama isbaddel ku sameyso waxaad rabto inaad dhageysato. Raadi jilayaal, waxqabadyo, dabeecado, tobanaan sano, dhaqan ama isticmaalaan karraaniga dukaanka rikoodhka si ay kuu siiyaan talooyin muusikada xiisaha leh!
Songza & '39s Playlists & amp; Popular
Markaad dhageysatid liiska cayaaraha ee soo jeediyay Songza, waxaa si toos ah loogu keydiyaa '' My Playlists '' si aad mar dambe u dhageysato. Waxaad ku dari kartaa liistada qaybta "Favorites" ee ku jira "My Playlists tab" oo waxaad u eegi kartaa waxa ay saaxiibbadu dhageystaan ​​Songza. Haddii saaxiib saxiixa Songza loo maro Facebook , waxqabadkoodu wuxuu ku muujin doonaa qaybta "Saaxiibka" ee hoos yimaada tabobarkayga My Playlist.
Marka la eego "Popular" tab, waxaad ka hubin kartaa farabadan oo dhan ee heesaha rikoodhada oo hadda kulul. U fiirso waxa soo jiidanaya, isbedelka iyo hadda oo leh "All-time." Songza wuxuu ku siinayaa siyaabo badan oo aad ku ogaato muusikada cusub iyo ciyaaro cusub , waa ku dhawaad ​​ma ahan in ay ka baxaan muusikada si ay dhagaystaan.
Dib u Eegista Khabiir ee Songza
Songza waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aan waligood isticmaali jiray. Ma yaabin in ay ku dhowaad 2 milyan oo qof isticmaaleen tan iyo bishii Juun 2012 iyo in ay leedahay heerka ka haynta 50 boqolkiiba.
Songza 'Tusaaleyaal Aqoonis-weydaarsi' iyo habab lagu baadigoobayo muusikada cusub ee ugu quruxda badan ee adeega muusikada kale ee aan isku dayay.
Samaynta xarfaha ciyaaraha xagashada waa waqti la qaato, waxaana jeclahay Songza waqtigeeda iyo waqtiga nooca ah ee aan ku jiro. Xitaa waxay qaadaneysaa xilli ciyaareedka ama maalmaha. Waqtiga xaadirka ah ee Christmas, waxaan rajeynayaa in ciyaaraha fasaxyada ay bilaabaan inay bilaabaan!
Hagaajinta app wuxuu qaadataa qaar ka mid ah helitaanka loo isticmaalo, laakiin waxaa si fiican loo naqshadeeyey la siiyay sida qaababka badan ee jira. Waan jeclahay in aad dooran karto inaad qariso ciyaaryahanka ama si sahlan u muujiso cayaarta marka aad rabto inaad raadiso muusiko dheeraad ah.
Waxaad si fudud u bedeli kartaa ciyaaryahanada si aad ula wadaagto waxa aad dhegeysaneyso Facebook, Twitter ama email. Waxaa sidoo kale jira boorso yaryar oo wax iibsanaya oo aad u raadinaya heesaha iTunes si loo arko haddii ay halkaas jirto.
Anigu ma heli karo wax khalad ah arjigan. Waxaan u maleynayaa inaan kaliya ku kalsoonahay inay ka shaqeyneysay iPod Touch aniga oo aan isku xireyn WiFi . Weli, ma qaadato xog aad u badan marka aan ku isticmaalo telefoonka aan ku xiranahay oo leh xirka 3G.
Haddii aad jeceshahay muusikada, waxaan aad uugu talinaynaa in aad tijaabiso Songza. Iyo wax kasta oo ay bixiso iyada oo aan u baahnayn in ay bixiso boqolkiiba, waa hubaal waa u qalantaa. Songza waxaa laga heli karaa iPhone (waafaqsan iPod Touch iyo iPad), Android iyo Kindle Fire.
Next article soo jeedin: 10 ka mid ah Popular Popular Free Streaming Apps & Websaytka
Tababarka FCP 7 - Horudhaca Editing
5 Tifaftirayaasha Best Free MP3 Tag
Sida loo sameeyo Liiska Play Custom ee Windows Media Player 11
Tango Free Mobile Video Wicitaanka ah oo leh 3G, 4G, iyo Wifi
Caano Caan ah Su'aalaha badanaa la isweydiiyo
Dib u eegista Senuti, Software Transfer Transfer
Abuurista Barnaamijka Bilaashka Ah Ee Bilaashka Ah
Sida loo Sameeyo Dakhliga WMP ee Dajinta: Dajinta Muusikada
Saddexda Adeegga Kaydinta Sayniska ee Best Free Online
Waa maxay sida dhabta ah ee loo yaqaan 'Spouring'? Sidee Shaqeyntu u shaqeysaa?
Dib-u-eegidda Nidaamka Wada-Hadalka Tiyaatarka Orb
Khiyaamadda Oblivion - Ammaanka iyo Amarada Kursiga
7-tii ugu fiicnayd ee kulaylka lagu iibsado hurdo sanadka 2018
Faa'iidooyinka iyo Ka-reebista ASTRA32 3.50
Faa'iidooyinka isticmaalka Antenna TV
Astaamaha Noocyada Muuqaalka
Baro Calaamadee CSS
Corel Ventura ma ku ordi doonaa Windows 7 Computer?
Monoprice 10565 Nidaamka Wada-Hadalka Guriga - Dib-u-eegis
Raadiyaha Hawlaha Wanaagsan ee $ 100 ama ka yar
Isticmaalka Ribbon ee Excel
4 Xayeysiinta Spyware iyo Adware Det Detection & Removal Software
Isticmaalka Markdown ee Email si uu ugu diro fariimaha qoraalka tooska ah
Ku baddel Macaamiisha Muuqaalka ee Maqaarka Maqaarka ee Kaydinta Si fudud
Waa maxay XVO File?
Talooyinka Soodhawaynta Amarka Windows Vista (Qaybta 3aad)
VIZIO VSB210WS 2.1 Dib-u-eegga Waxyaabaha Kale ee Maqalka Kanaalka
Tusaale ahaan isticmaalka amarka "ping"
8-da ugu wanaagsan ee ASUS Laptops inay iibsadaan sanadka 2018
Barnaamijka Kaydka Kaydka ee Mac
Dejinta Unix / Linux File iyo Xuquuqda Helista ee Directory